England vs Nigeria: Ciyaar Lagu Tijaabinayo Awoodda Afrika Ee Koobka Adduunka
HomeAfricaEngland vs Nigeria: Ciyaar Lagu Tijaabinayo Awoodda Afrika Ee Koobka Adduunka
11/01/2018 Abdiwahab Ahmed
England ayaa ku martigelin doonta garoonka Wembley xulka qaranka Nigeria oo ah dalka koowaad ee qaaradda Afrika ay rajada ka sugayso, kaas oo qiimayn gaar ah lagu samayn doono, isla markaana lagala soo bixi doono sida ay qaaradda Afrika ku tegi doonto Koobka Adduunka.
Ingiriisku ma martigelinayo Nigeria oo kaliya, hase yeeshee, waxa kale oo ay garoonka Elland Road jilbaha isku dhigan doonaan Costa Rica.
Labadan ciyaarood oo noqon doona kuwa ugu dambeeya ee qaramadani ay ciyaari doonaan ka hor Koobka Adduunka, ayaa waxa Nigeria ay marti u noqon doontaa Ingiriiska 2 June, taas oo ah toddobaad ka hor wakhtiga uu bilaabmayo Koobka Adduunku.
Costa Rica ayaa iman doonta garoonka kooxda kubadda cagta Leeds United, halkaas oo England ay dharka isku dhigan doonaan, waxaanay muddaysan tahay ciyaartaasi 7 June.
Ciyaarta ugu soo horreysa ee xulka qaranka England ee Koobka Adduunku waxay noqon doontaa 18 June, markaas oo ay iska hor iman doonaan dal ka mid ah shanta waddan ee qaaradda Afrika uga qayb gelaya Koobka Adduunka, kaas oo ah Tunisia.
Waxa ugu xigi doona oo Ingiriisku ay la ciyaai doonaan Costa Rica, halka ay ugu dambaynta foodda isgelin doonaan Belgium oo ay kawada tirsan yihiin Group G.
Ciyaaraha saaxiibtinimo ee isku diyaarinta Koobka Adduunka, England inta aanay la ciyaarin Nigeria iyo Costa Rica, waxay bisha March is arki doonaan Netherland iyo Italy.
Taariikh Kooban: Nigeria vs England
Taariikhda casriga ah, iskuma badna labadan waddan inay ciyaaro saaxiibtinimo iskaga hor yimaaddaan, sidaas oo kale tartamada caalamiga ah sida koobka adduunka iskuma arkaan.
Markii iskugu dambaysay ee ay wada ciyaareen, waxay ahayd Koobkii Adduunka 2002 ee lagu qabtay Japan iyo Korea, waxaanay ciyaartoodu ku dhamaatay barbar dhac 0-0 ah. Waxa xusid mudan in Nigeria ay kulankaas oo bandhigtay ciyaar aad loola dhacay, taas oo ay daadihinayeen xiddigo ay hormood u ahaayeen Jaj-jay Okocha, Kanu iyo rag kale oo orodka iyo xirfadda uu Rabbi hibo u siiyey.
Waxa kale oo kasii horreeyey sannadkii 1994-kii, waxay ladan waddan wada yeesheen ciyaar saaxiibtinimo, taas oo ku dhamaatay 1-0 ay guushu ku raacday England, waxaana goolka dhaliyey David Platt oo ahaa kabtanka xulka qaranka England.
Ciyaartan oo 16 November, 1994 ka dhacday garoonka Wembley, waxa daawanayey 37,196 qof, waxaana xulka qaranka Nigeria u ciyaaray laacibiintan:
Goolhaye: Peter Rufai
Difaac: Augustine Eguavoen, Benedict Iroha, Uchenna Okafor, Uche Okechukwu
Khadka dhexe: Mutiu Adepoju, Emmanuel Amunike, Jay Jay Okocha, Finidi George
Weerarka: Daniel Amokachi iyo Rachidi Yekini
Beddelka: Victor Ikpeba, fan Ekoku, Nwankwo Kanu
Dhinaca England, waxa u saftay kulankaas u saftay:
Goolka: Tim Flowers
Difaac: Rob Jones, Steve Howey, Neil Ruddock iyo Graeme Le Saux
Dhexda: Rob Lee, Steve McManaman, David Platt (captain sidoo kalena goolka dhaliyey), Dennis Wise
Weerarka hore: John Barnes, Peter Beardsley iyo Alan Shearer
Beddelka: Matt Le Tissier iyo Teddy Sheringham
Ciyaartooyada Chelsea Oo Iyagoo Kor U Sida Garoonka Ka Saaray Drogba
24/05/2015 Abdiwahab Ahmed
Neymar, Mbappe, Griezmann Iyo Xiddigaha Kale Ee U Sharraxan Beddelka Ronaldo
17/06/2017 Abdiwahab Ahmed
Villarreal CF vs Eibar
01/04/2017 Abdiwahab Ahmed